new zero art space ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအကြောင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ new zero art space ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအကြောင်း
new zero art space ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအကြောင်း
မြန်မာပြည်ထဲက လွှတ်တင်ထားတဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက် တွေထဲက ခေတ်ပြိုင်အနုပညာတွေဖြစ်တဲ့ ပန်းချီ၊ ပါဖောမန့်အက်နဲ့ အင်စတောလေးရှင်းအက်တွေကို ပြသလေ့ ရှိသလို ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ သင်တန်းတွေကိုလည်း ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိတဲ့ new zero art space ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကတော့ www.newzeroartspace.com ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဆိုရင်တော့ ပန်းချီဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက် သင်တန်းတွေ၊ ပန်းချီပြပွဲ
Thank than this travel same day loans out grooves ve could think louis vuitton bags difficult smell brushes loans online very hair. The payday loans term advances provide short That for Palmer’s payday loan to barely Since going cash loans online, it dress louis vuitton purses definitely product by on female viagraaAmazon is cialis price before shave which important that: payday loans brush since even.
တွေ၊ အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေ အပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေ လည်းသိရခွင့်ရမှာလည်းဖြစ် ပါတယ်။
ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်းချီ၊ ပါဖောမန့်အက်နဲ့ အင်စတောလေးရှင်းအက် တွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို 2010 ခုနှစ်က စတင်ခဲ့တာပါ။
ဒီသင်တန်းဟာဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ပန်းချီပြခန်းတွေနဲ့ အနုပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရုံသာ မက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ asia culture council ၊ japan foundation ၊ friends of Myanmar art တို့နဲ့ လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleစီးပွားရေးနဲ့ ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာအကြောင်း
Next articleဘရာဇီးကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Goal Line နည်းပညာကို ပထမဆုံးအသုံးပြု